Cosoble: Xukuumada Soomaalliya diyaar uma ahan doorashooyinka waayo weli xisbi ma sameysan” | Jowhar Somali news Leader
Home News Cosoble: Xukuumada Soomaalliya diyaar uma ahan doorashooyinka waayo weli xisbi ma sameysan”
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali ayaa ku eedeeyay dowlada federalka inaysan dooneyn in dalka doorasho ka dhacdo ,waxana uu soo dhoweeyay saxiixa Madaxweynaha ee sharciga doorashooyinka.
Cabdqaadir Cosoble oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay in madaxda dowlada aysan raali ka ahayn in la qabto doorashooyinka maadaama aysan weli sameysan xisbi siyaasadeed.
“Haddii madaxda dowladu ay raali ka yihiin doorashooyinka waxa ay sameysan lahaayeen xisbi lagana yeelayo waqti hanaloogu daro.”ayuu si kulul u yiri C/qaadir Cosoble.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Madxweyne farmaajo u booqanayo magaalada Hargeysa isagoo xusay in aysan ahayn Madaxweynaha Soomaaliya mar walba uu sida uu doono ka yeelo Abiy Axmed.
“Waxaan ka sugeynay madaxweynaha inuu ka hadlo arrimaha suuqa la isla dhex marayay ee Hargeysa balse kama hadlin,”ayuu yiri Cosoble.
Xildhibaan Cosoble ayaa ku celceliyay in aan laga yeeli doonin madaxda qaranka muddo kororsi.”Hal maalin laguma darayo waayo haddii dowladu ay dooneyso in ay doorasho dhacdo waxay ka shaqeyn lahaayeen u diyaargarowga doorashada.”ayuu yiri Xildhibaan Cosoble.